Tiyooriin akkaataa uumama pilaaneetii ibsu geddarame - BBC News Afaan Oromoo
Tiyooriin akkaataa uumama pilaaneetii ibsu geddarame
Goodayyaa suuraa Waanti Arrookot jedhamu kan kutaa sirna aduu alaa Kuuper jedhamuttit argame haftee yeroo pilaanetonni uumaman irraa argame dha
Saayintistoonnii tiyoorii kana dura akkaataa uumama pilaaneetota himu haala murteessaa taheen jijjjiruu isaanii beeksisan.
Yaadni kana dura ture wantoonni haala hamaa taheen walitti diigamuun/caccabuun waanta guddaa uumaniitu addunyaan kun uumame kan jedhu ture.
Qorannoon haaraan kun garuu taateen uumamaa sun hagas hammaataa hin turre jedha-inumaayyuu wantoota haala salpaa taheen walitti maxxanaa dhufan jedha.
Meeshaan umuriidhaan sirna aduu caalu abuurame
Dargaggoon ganna 17 pilaaneetii haaraa abuure
Qorannaan kun joornaaliii Saayinsii Waldaa Guddina Saayinsii Ameerikaa irratti, Siyaatilitti dhiyaate
Hogganaan qorannichaa Dr Alan Isteern, argannoon kun 'ajaa'iba guddaa dha,' jedhan.
''Tiyooriin bara 1960 irraa qabee jiru, wantoonni haala hamaa taheen walitti bu'u jedha kan ammaa garuu, wantoonni suuta suuta walitti maxxanuu jedha. Kunimmoo saayinsii pilaaneetii keessatti waan yeroo baayyee hin mudanne dha, amma garuu waansaa barree jirra,'' jedhan Dr Alan Isteern.
Argannoon kun wanta sirna soolaarii karaa alaan jiru gadi fageenyaan erga qorataniin booda kan bira gahame dha.
Wanti Arrookot jedhame kun aduurraa kiloomeetira biiliyoona jaha kan fagaatu yoo tahu iddoo Kuuper jedhamutti argama.
Wantichi yeroo pilaaneetiin sirna soolaarii keessatti uumame waggaa biiliyoona 4.6 dura haftee qaamota lama irraa ijaarame dha.
Saayintistoonni suuraa wanticha Arrookot suuraa qulqulleessee mul'isu yeroo NASA'n xiyyaara gamasitti erge kaaserraa argatan.
Waantichi argamuun saayintistootaaf tiyooriiwwan wantoonnni haala hamaa taheen ni diigaman/caccaban moo? Suuta walitti siqaa wal qabatan kan jedhu akka madaalan carraa kenneef.
Xiinxalli Dr Isteernii fi garee pilaaneetonni wantoonni haala hamaa taheen caccabuun uumamani kan jedhuuf ragaan hin argamane jedhan.
Qorattoonni kunneen hafteen caccabaa wantootaa kana nutti agarsiisu hin jiru jedhan.
''Waanti Arrookot jedhamu, akka tasaa argame garaagarummaa tiyooriiwwan gurguddoo lama gidduu jiru agarsiisnaan, Dr Isteern kun sadarkaa murteessaa dha,'' jedhu.
Yaada pilaaneetoota wantooti uuman garee waantootaa xixxiqqoo walitti maxxananiitu kan dubbate waggaa 15 dura Piroof Andeers Joonsan, Siwiidinitti ture.
Piroof Andarsan, ''waggaa 15 dura yaada kan yeroon fide sodaadheen ture sababiinsaa immoo warra durii irraa adda gatii taheef, hojii koo irratti dogoggorrii ni jiraata jedhee yadda'een ture, amma hojiin kee akkasitti yoo mirkanaa'u haaragalfiitu sitti dhagahama,'' jedha.
Piroof Andarsan, gammachuusaa maatii isaa waliin piizaa fi Kookaa dhaan kabajeera.
Dr Maagiin injinara sagantaa BBC's Sky at Night kan dhiyeessitu yoo tahu waanta tokko qofa ilaaluun qofa madaala eeguusaarratti shakkii yoo qabaatteyyuu waan saanyintistoonni jedhan hiika ni kenna jetti.
''Tiyoorii kana qabaachuun waan gaarii dha sababiinsaa tiyoorii isa kana duraa irratti waantoonni erga caccabanii uumamanii maaliif walitti maxxanan gaaffiin jedhu jira ture.
Maqaan waanticha Arrookot jedhame kanaa hiiktisaa 'Samii' jechuu dha afaan saboota ganamaaa Ameerikaa Poowhaataan jedhamaniin.
Dargaggoon ganna 17 NASA'tti pilaaneetii haaraa abuure